Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ihe na -ere ahịa Pingtai
Akụkụ akụkụ nke ihe mkpuchi ihe
Otu Sprocket Segment Group
Ndị otu n'ihu Idler
Ọgba Chain Hub
Track Ime Ngwuputa ọrụ
Sochie Njikọ Njikọ Chain
Akụkụ Sprocket Ekepụtara
N'ihu Idler Dulldozer
Ọrụ Ngwuputa ụgbọ ala
Aha akara: PT'ZM
Nọmba nlereanya D11
Ahịa: Mkparịta ụka
Nkwakọ ngwaahịa: Fumigate mbukota oke osimiri
Uru nke ịgbapụ agbapụ
Forging for sprocket part and special heat treatment technique, so reach the best wear-resistance and prolong life time to Oke. Vertical machining center CNC processing production, make the size more correct, more beautiful ọdịdị.
Inwe oke nhọrọ. Akụkụ ahụ na -adabara maka ụdị pụrụ iche nke ụdị ihe mgbawa na bulldozer site na 0.8T ruo 100T. A na -etinye ya n'ọrụ na bulldozers na excavators nke Caterpillar, komatsu, Hitachi, Kobelco na Hyundai wdg.
Ozi ihe ọmụma zuru ezu
Nkọwa: CAT D11 Sprocket nke MINING OPERATION
Aha aha: PT'ZM
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa: Fumigate mbukota oke osimiri
Oge Mbuga ozi: 7-30 ụbọchị
Oge ịkwụ ụgwọ: L/CT/T
Okwu ọnụahịa: FOB/ CIF/ CFR
Opekempe iji buru ibu: 1 PC
Tụkwasịnụ Ikike: 3000 PCS/ọnwa
Usoro: Na -akwa akwa
Ekweghị ekwe: HRC48-55, omimi 5-8mm
Ogo: Ngwuputa ọrụ
Oge ikike: Oge 1600
Mgbe-sales ọrụ: Nkwado teknụzụ vidiyo, nkwado ntanetị
Agba: Odo ma ọ bụ oji ma ọ bụ onye ahịa chọrọ
Ngwa: Bulldozer & Crawler excavator
· Ahịa ụlọ ahịa ozugbo na ọnụ ahịa ezi uche dị na ya
· Ahụmịhe afọ 34 na nrụpụta ihe na igwe nrụpụta ihe
· Usoro ịkwụ ụgwọ na -agbanwe agbanwe gụnyere T/T, L/C Na ndị ọzọ
Team Ndị otu ndị ọrụ ọrịre, Nnyocha dị mma, na mkpesa, Nduzi ngwa agha ụgbọ mmiri
· Ọrụ ire ahịa mgbe e mesịrị: Nkwado nka na ụzụ, Nkwado ịntanetị 24h
Ị bụ onye ahịa ma ọ bụ onye nrụpụta? Na ụlọ ọrụ gị Okwu Mmalite?
QUANZHOU PINGTAI ENGINEERING igwe CO., LTD e guzobere na 1987, Mgbe ihe karịrị afọ 20 nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ .Pingtai aghọwo a China na-eduga na a ụwa ama emeputa. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke na -ahụ maka njikọta igwe nrụpụta ihe na akụrụngwa nrụpụta na ịre ahịa netwọkụ.
Companylọ ọrụ ahụ na-arụpụta ụdị ihe dị iche iche nke ndị na-anya ihe mkpuchi bulldzers akụkụ akụkụ ahụ, yana ngwaahịa gụnyere ndị na-anaghị ebu ibu ma na-eyi akụkụ ndị na-eguzogide ọgwụ wdg.
Kedụ ka m ga -esi jide n’aka na akụkụ ahụ ga -adabara onye na -egwupụta ihe m?
Nye anyị nọmba nlereanya ziri ezi/ nọmba nọmba igwe/ ọnụọgụ ọ bụla na akụkụ ya ma ọ bụ tụọ akụkụ ndị ahụ na -enye anyị nha ma ọ bụ eserese.
Nke gara aga: N'ihu Idler Dulldozer
Osote: Sochie Njikọ Njikọ Chain
Ọrụ ịwụ dị arọ
akụkụ mgbanaka bulldozer D60
D11 BULLDOZER N'ihu IDLER Ọgbakọ 9W9651-CATER ...
Akụkụ ime alụmdi na nwunye Komatsu D475 Front Idler
Copyright 2021: Ikike niile echekwabara.
Ihe mkpuchi ihe mkpuchi ịwụ, Iburu Track ala, Bit ejedebela ugboro abụọ, Onye na -egwu ihe na -agba bọket, Ike kpọchie, Ndị na -agba egwu Rubber Track,